KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Dowladda Federaalka & Ahlu Sunna oo ku kala tagay Wadahadaladii Dhuusamareeb
Friday 19 June 2015 10:24
Dowladda Federaalka & Ahlu Sunna oo ku kala tagay Wadahadaladii Dhuusamareeb
Dhuusamareeb (KON) - Wararka aan helayno ayaa sheegaya in uu fashil ku dhamaaday Wadahadalkii uga socda Magaalada Dhuusamareeb Ahlu Sunna & Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Wadahadalka oo soo socday Labadii Maalmood ee lasoo dhaafay ayaa waxay kusoo dhamaadeen Guul Darro kadib markii Ahlu Sunna ay diideen Qodobo ay Dowladda Federaalka u jeedisay oo ku aadan Nabada & Arrimaha Maamul u samayenta Gobolada Dhexe.
Wasiirka Arrimaha Gudaha DFS C/raxmaan Odawaa ayaa isagas oo tagay Dhuusamareeb isagoo aan wax xal ah lasoo gaarin Ahlu Sunna, waxaana uu dib ugu laabtay Magaalada Cadaado oo Shir Muhiim ah oo Heer gaba-gabo ah maraya uga socda Odayaasha Shacabka Galgaduud & Mudug oo Maamul ay leeyihiin ku dhisanayaan.
Ahlu Sunna ayaa usoo jeedisay Dowladda Federaalka Shuruud badan oo ay kamid yihiin in Maamul la dhisayo Magacooda loogu yeero & In Golaga Wasiirada Soomaaliya laga siiyo Xubno, taasi oo Wasiirka Arrimaha Gudah ka aqbali waayay.
Lama oga Tallaabada xigi doonto oo Dowladda ka qaadi doonto Ahlu Sunna, oo hadda u muuqda kuwa Cabaqad ku noqonaya Maamulka Gobolada Dhexe, oo Shirkiisa la filayo in dhawaan laguu gunaanado.
Wasiirka Arrimaha Gudaha ayaa usoo jeediyay Ahlu Sunna inay Nabada qaataan, oo isagaa baxaan Dhuusamareeb, sidoo kalena wax la qeybsadaan Bulshadooda maadaama ay kamid ahaayeen Dadkii saxiixay Shirka Cadaado.